Tag: warbaahinta bulshada oo saxan | Martech Zone
Tag: warbaahinta bulshada ayaa saxan
Robert Weller wuxuu ku soo koobay boggiisa suuq-geynta 10-ka nooc ee ugu weyn ee u dhexeeya suuq-geynta warbaahinta caadiga ah iyo kuwa bulshada ee laga soo xigtay buugga uu qoray Thomas Schenke ee Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada iyo Recht ee ku yaal boggan. Liistadu waa mid dhammaystiran, oo bixinaysa faa'iidooyinka xawaaraha, qaab-dhismeedka, joogtaynta, barxadaha, sharci ahaanta, jihada, iyo guryaha wada-hadalka. Waxaa jira agaasimayaal suuq-dhaqameed badan oo ka shaqeeya shirkadaha maalmahan kuwaas oo aan weli aqoonsan kala duwanaanshaha ama fahmin faa'iidooyinka - waxaan rajeynayaa in muuqaalkan muuqaalku uu ka caawinayo tilmaanta furaha
Waxaan jecel nahay SeanieMic, oo ah heesaha heesaha sameeya ee sameeya tan gooyn aad u fiican. Heesahiisa ayaa ka dhigay inay ku faafaan webka oo dhan, sidaa darteed waxaan ka codsannay inuu ku riyoodo ereyo ku saabsan buuggeenna, Blogging Corporate for Dummies. Seanie ayaa qodbay! Aniga oo aan gacanta ku haynin nuqul buugga ah oo gacantiisa ku qoran, ayaan kor u qaadnay biir maalmo yar ka dibna waxaannu haynaa sheeko-gacmeed! Haddii aad akhriday buugga, waad jeclaan doontaa tan…